Izizathu zokurhuda kumntwana
I-diarrhea yiyona nto ibangela kakhulu ukuphazamiseka kokugaya kubantwana abancinci. I-diarrhea ngokwayo ayiyisifo. Oku kuyimpawu yokuba emzimbeni womntwana kukho ukungasebenzi, ngokuqhelekileyo kwisistim sokutya. Xa isifo sohudo sisenzeka kumntwana omncinci, into ephambili kukubona isizathu salesi sifo.
Ukuvela kwesitulo esikhuselekileyo kubantwana abancinci
Kukho izinto ezininzi ezinokukhupha isifo sohudo kubantwana. I-diarrhea kubantwana abancinci inokubangelwa ukungondleki. Umzekelo, xa usondla ukutya okunzima. I-diarrhea iyakwenzeka xa ushintshe ukususela ekunceliseni ukunyusa ukutya okuqhelekileyo. Ngokuqhelekileyo, imbangela yesifo sohudo kubantwana kukusuleleka kwintsholongwane. Kule meko, umsebenzi wesilonda uyaphazamiseka yi-fungi enobungozi okanye ibhaktheriya. Kwakhona, isizathu sohudo kubantwana abancinci sinokubangela ukuphazamiseka kwesistim somzimba, iintsholongwane zokuzalwa zesifo se-digestive, ukuphazamiseka kwemizimba, njl njl.
Ukuxinezeleka (ukwesaba, iimbilini, umdlalo) - kunokukhuphaza isifo sohudo kubantwana abancinci. Olu luleko aluyingozi, kodwa kuyimfuneko ukuyiqwalasela. Ulodo olufanayo kumntwana lunokuhlala ixesha elide, ukuba umntwana unokukhathazeka. Kuyimfuneko kubazali kule ngxaki ukuchonga isizathu kunye nokuyicombulula.
I-diarrhea kwiintsholongwane zamathumbu kubantwana abancinci ngokuqhelekileyo ihamba kunye nokuhlanza. Kwakhona, intlungu esiswini, isifo somkhuhlane, isisongela. Unyango kulolu hlobo uphelela ukusela okuphambili (ukukhusela ukukhulelwa kwamanzi), ukulamba kwendlala, ukuzaliswa kwelahleko kunye ne-electrolytes. Abazali abaneempawu ezinjalo kufuneka bakhawuleze babize i-ambulensi. Umntwana kufuneka abekwe esibhedlele ukuze kubekwe i-droppers.
Kananjalo ukuhanjiswa kubantwana kunokubangela ukuba isisombululo siphendule. Kule mfuneko kuyimfuneko ukuchonga ngoncedo lwe-allergen yeengcali. Xa kupheliswa i-allergen, eyabangela ukuba umntwana abe nempembelelo, isifo sohudo siya kudlula.
Kwabantwana abancinci, urhudo lunokubangelwa yi-intestinal dysbiosis, ebonakalayo ngokuphulwa kwe-microflora. Olu dhurho kufuneka lugqirwe kunye namayeza. I-stool ene-diarrhea inephunga lemvubelo kwaye inemibala eluhlaza. Inokuthi ikhuphe. Usana luba neentlungu, kunye neentlungu zesisu. I-Dysbacteriosis kubantwana abancinci kaninzi ayihlali ixesha elide, kodwa idinga isisombululo esikhethekileyo.
Uhudo olungapheliyo kubantwana
Kukhona urhudo olungapheliyo kubantwana abancinci abanezifo ezininzi eziphazamisa intliziyo yomzimba. Ziyakwazi ukwahlula zibe ngamaqela amabini.
Izifo, ngenxa yokuba isisu esincinci sokugaya izondlo siphazamiseka ngenxa yokungakwazi ukusebenza kwee-enzyme zokugaya. Ezi zifo ze-pancreatic - i-cystic fibrosis, i-pancreas ye-cystic, isifo sikashukela, i-enterokinase, i-cystic pancreas. I-pancreatitis engapheliyo, i-pancreatic hypoplasia. Le dysbacteriosis, kunye nokusilela kwe-bile acid.
Iqela lesibini liquka izifo apho ukutshatyalaliswa kwezidumbu kumathumbu amancinci kuphazamiseka. Esi sifo ekudleni kokutya kwephepha lomathumbu. I-Lactase engenakwanela, ukungabikho kwe-fructose, i-glucose-galactose insufficiency. Izifo I-Celiac isifo seprotheyini esincinci samathumbu emathumbu emathunjini.
Kodwa musa ukuxubha abazali beengxaki. Xa kunesifo sohudo, umntwana kufuneka afune ukunxibelelana nodokotela wezilwanyana. Kwimeko nganye, kubalulekile ukucacisa ukuba kutheni i-diarrhea ibonakale. Unyango lulunye kumntu ngamnye. Ngokukodwa ukuba isitulo somntwana sitshintshile umbala, saba yincwadana okanye i-frothy, kwakukho ukubona, kunceda uncedo. Oku kunokukhokelela ekudambiseni umzimba, enemiphumo engathandekiyo. Ukuba kukho ukwanda kweqondo lokushisa komzimba, intlungu ebuhlungu esiswini, ukuhlanza kumntwana omncinci, kuyimfuneko, ngaphandle kokulibala, ukubiza i-ambulensi.
Abantwana bakho basengozini
Ukunyuka kwengcinezelo ebantwini kubantwana
Imfundo yemvelo kunye neMidlalo yabantwana
Ukunyangwa kwengqumbo yabantwana
Ikhekhe leSan ngebhanana kunye nama-strawberries
I-recipe elula yokugcinwa kwesikhokelo somdabu kunye ne-ukhilimu
Isidlo esivela kwintlanzi ekhuniweyo: ngokukhawuleza, elula kwaye ehlekayo
Isidlo se-Cheese - isikhali esiyimfihlo seemodeli eziphezulu: I-TOP-3 izitya zasehlobo ezilula kunye nezolisayo
Inobungozi kunye nenzuzo yesoya
Izixhobo kunye nezixhobo zokubhala kunye neenwele
Umvuzo "UDon Sharon"
Indlela ekhawuleza kakhulu yokunciphisa umzimba
Malunga nobomi bukaTyganov owayengumfazi wakhe waxelelwa nguMaria Poroshina
Ekugqibeleni kokubonisa "Izwi", ixesha le-5 lahlulwa nguDaria Antoniuk
Imaski yeenwele ezisekelwe kwiitapile